Blog - ngwa nbipute Winpal WP-Q3A, usoro ọhụụ nke ọfịs mkpanaka
Winpal WP-Q3A ngwa nbipute mkpanaka, usoro ọhụụ nke ọfịs mkpanaka
Site na mmụba nke ọkwa sayensị na mmepe ngwa ngwa nke akụ na ụba mmadụ, ndị mmadụ ugbu a anaghịzi anọ n'ụlọ ọrụ ime ụlọ. Walkszọ ndụ niile na ndụ ndị mmadụ kwa ụbọchị, ebe dị iche iche na ebe anaghị arụ ọrụ na-amalite iji ngwa na ngwa ndị ọzọ metụtara ya. Dị ka otu n'ime ha, ndị na-ebi akwụkwọ nnata obere akwụkwọ na-eji nke nta nke nta amara ndị mmadụ, ọ na-emekwa ka ọfịs ndị mmadụ dịkwuo mfe.
1. Obere, ìhè na inogide
Obere ngwa nbipute, dị ka aha ya na-egosi, ọ ga-adị mfe iburu na ojiji. WP-Q3A nwere ndepụta nke 124 * 108 * 61mm, nke nwere ike ijikwa otu aka. Ibu nke 357g dị mfe ibu, ndụ isi bipụtara ruo 30Km, ọ na-adịgide adịgide.
2. printinggba ọsọ ọsọ ọsọ na ndụ batrị ogologo
Mbipụta ọsọ na-ekpebi arụmọrụ ọrụ. N'ikwu okwu n'ozuzu, ibipụta saịtị na-achọ ọsọ ọsọ ọsọ iji chekwaa oge echere ndị ọrụ dị mkpa. N'otu oge ahụ, n'ihi ịrụ ọrụ n'èzí, enweghị ike iji ihe nkwụnye mpụga maka ike ọkọnọ, ya mere a chọrọ batrị nwere nnukwu ikike na mpempe akwụkwọ ikike dị ala iji gboo mkpa nke mbipụta na-aga n'ihu. WP-Q3A nwere batrị lithium-ion batrị 2500mAh nwere ike ịnweta.
3. Ọ dị mfe ịrụ ọrụ
Ọdịdị nhazi akwụkwọ dị mfe iji rụọ ọrụ, ntọala ntọala ọrụ dị mfe ma dị mfe ịrụ ọrụ, ma ndị bịara ọhụrụ ma ọ bụ na ọ bụghị, nwere ike ịghọta ojiji nke WP-Q3A na oge mbụ wee bido ngwa ngwa.
4. Multi-interface, nhazi ọgaranya
Winpal WP-Q3A nwere eriri USB na ihu Bluetooth, nke dị mma maka njikọ dị n'èzí yana ngwaọrụ dị iche iche maka ịrụ ọrụ na ojiji. N'otu oge ahụ, ọ mepụtakwarala ọrụ nyocha akwụkwọ, nke na-anaghị agbaghara iwu, ọ bụghị iwu ọjọọ, ọ bụkwa ezigbo onye inyeaka maka ọfịs n'èzí.
Ugbu a, n'okpuru usoro izugbe nke ọfịs mkpanaka ọgụgụ isi, a na-eji ndị na-ebi akwụkwọ nnata ego a na-ebugharị ebugharị, ndị na-adaba adaba iji buru ma jiri, ngwa ngwa na ịrụ ọrụ nke ọma, ma melite arụmọrụ nke ọma. The n'elu bụ iwebata Rongda Technology si obere nnata na ngwa nbipute WP-Q3A.
Onye na-ahụ maka nnata ihe ntanye 80mm, Wifi Receipt Printer, Nnata Printer, Nnata Mobile Printer, Onye na-ebipụta ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa, 80mm Kwesie Nnata Printer,